Ku dhowaad maalin kasta warbaahintu waxay faafisaa natiijooyinka sahannada caafimaadka: sahanno ku saabsan caafimaadka dadka da'da yar, qaar ka mid ah cudurrada daba-dheeraada ama ba'an, dabeecadaha caafimaadka ... Weligaa ma rabtay inaad ogaato sida ay u shaqeyso?
MOOC PoP-HealtH, "Baaritaanka caafimaadka: sidee buu u shaqeeyaa?" waxay kuu ogolaan doontaa inaad fahanto sida sahamintan loo dhisay.
Koorsadan oo 6-usbuuc ah ayaa ku bari doonta dhamaan heerarka laga soo bilaabo fikradaynta ilaa samaynta sahan, iyo gaar ahaan sahanka faafa ee qeexan. Usbuuc kasta waxaa loo go'aamin doonaa xilli gaar ah ee horumarinta sahanka. Talaabada ugu horeysa waa in la fahmo marxaladda cudur daarka ee ujeedada baaritaanka iyo qeexitaankeeda, kadibna wajiga aqoonsiga dadka la baarayo. Marka saddexaad, waxaad u dhowaan doontaa dhismaha qalabka ururinta, ka dibna doorashada habka ururinta, taas oo ah qeexida meesha, sida. Todobaadka 5-aad waxaa loo go'aamin doonaa soo bandhigida hirgelinta sahanka. Ugu dambeyntiina, usbuuca ugu dambeeya wuxuu muujin doonaa marxaladaha falanqaynta iyo isgaarsiinta natiijooyinka.
Koox waxbarasho oo ka kooban afar afaf oo ka socda Jaamacadda Bordeaux (ISPED, Inserm-University of Bordeaux U1219 xarunta cilmi-baarista iyo UF Education Sciences), oo ay la socdaan xirfadlayaasha caafimaadka dadweynaha (khubaro iyo maareeyayaasha sahanka) iyo masraxayada "Mister Gilles", ayaa wax walba samayn doona. si ay kaaga caawiyaan inaad si fiican u fahamto xogta sahanka ee aad maalin walba ka hesho wargeysyada iyo kuwa laga yaabo inaad adigu laftaadu ka qaybqaadatay.
Waad ku mahadsan tahay goobaha doodaha iyo isticmaalka shabakadaha bulshada, waxaad awoodi doontaa inaad la xiriirto macalimiinta iyo ardayda. .
Baarista caafimaadka: sidee u shaqeysaa? Diisambar 9, 2021Tranquillus
horeSi wada jir ah aan u yareyno joogitaanka biraha sunta ah ee saxankeena
socdaneefta dadka waaweyn